> Resource > Android > HTC Recovery: Ladnaansho Photos Lost, Videos iyo Music on Android
Tirtiraa fursadaha ii SD HTC card ... kabashada!
Ka dib markii ay safar ay u York qaadashada badan oo PIC / videos la telefoonka, aan joogay shaqada caajisin iyo xisaab email aan u fidinno on my telefoonka, oo si qalad ah la tirtiro dhammaan PIC iyo videos aan. Waxaa jira gurmad lahayn! Hab kasta oo aad ka heli dib oo dhan?
Waxyaabaha ay mar kale dhacaan! Waxaa jira dad badan oo ku forum weydiisanaya hab aan dib ugu heli xogta ay luntay in si ula kac ah laga badiyay, halka dad kale oo weli tiraa this. Haddii aad tahay nin nasiib darro, in la hubiyo in aan isticmaalin telefoonka HTC inay qaataan wixii sawiro cusub ama videos, ee xogta cusub masixi doono sawirka laga badiyay iyo videos si joogto ah. Waxa ay ku hayso asalka iyo u hesho a HTC kabashada qalab inay si dhakhso ah u badbaadiso xogta aad laga badiyay.
Hel barnaamij HTC soo kabashada: Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac (la heli karo Mavericks). Barnaamijka xogta HTC Tani waxay kaa caawinaysaa in aad ka bogsato videos, sawiro iyo music kaydsan kaarka SD HTC fudayd
Download version maxkamad free hoose si scan ka soo data lumay oo iyaga ku eegaan si ay u hubiyaan tayada hor soo kabashada.
Fiiro gaar ah: Haddii aad ka heli xogta aad rabto in aad la soo kabashada sawirkan, fadlan badbaadin natiijada scan ka hor inta aanad version bixisay. Markaas oo keliya u baahan tahay inaad soo dhoofsadaan natiijada ceshan xogta, si looga hortago khasaaro xogta ka dib.
Sidee inuu ka soo kabsado photos tirtiray, videos ka HTC
Halkan aynu qaadan version Windows ee Wondershare Photo Recovery in uu fuliyo kabashada HTC in faahfaahinta.
Tallaabada 1. Isku aad HTC in kombiyuutarka
Ku rakib iyo waxa maamula on your computer. Waxaad heli doontaa interface ee soo socda. Markaas xiriiriyaan HTC in kombiyuutarka, oo guji si "Ka bilow" kabashada HTC ah.
Tallaabada 2. Dooro HTC in iskaan
Halkan waxaad ka heli kartaa dhammaan disk ama qalabka ku xiran your computer. Dooro HTC oo ku dhufatey "Scan" in la helo sawiro iyo videos lumay.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha Leh ceshan xogta HTC
Marka scan ka baxayo, oo dhan recoverable audio, sawir iyo video files waxaa lagu soo bandhigaa, oo waxaad iyaga ku eegaan kartaa mid ka dhan mid ka mid in lagu hubiyo tayada. Markaas hubiyo kuwa aad dib u rabto iyo "Ladnaansho" iyaga la mid click.
HTC Dhacdo kabashada card SD:
Photo Recovery Arintan waxay u sahlaysaa in aad ka bogsato xogta HTC arrinta ma waxaad iyaga laga badiyay ay sabab u tahay:
»Files dhaco tirtiray ka Android
»Card ee Android helay kharribeen ama geli
Video tutorial soo kabashada HTC